I-Superb Bryson City Studio Cabin w/I-Hot tub & Patio! - I-Airbnb
I-Superb Bryson City Studio Cabin w/I-Hot tub & Patio!
Indawo yeholide esentabeni esecaleni ilindele iindwendwe eziyi-2 kwindlu yamaplanga eqeshisayo yeholide 'Snuggle Inn', kwimizuzu nje eyi- ukusuka kwiindawo zokuzonwabisa ezingaphandle nakwiindawo ezinomtsalane kwidolophu yaseBryson City! Indawo yokuhlala etofotofo inezinto zale mihla ezitofotofo ezifana neflat-screen TV, indawo yokubasa umlilo nekhitshi elinento yonke, ngoxa uza kuba nezinto ezinokusetyenziswa zaphandle ezintle ziquka iveranda egqunyiweyo, ibhafu enamanzi ashushu neveranda. Yonwabela iholide yabantu abathandanayo kwiiNtaba Ezinkulu zaseSmoky kunye nokufikelela lula kwizinto ezenziwayo ekuhlaleni!
*QAPHELA: Indlu ikwindlela enyukayo ibe kufuneka uqhube iivili ezine okanye zonke iivili (izithuthuthu/iibhayisekile azicetyiswanga) *
Isitudiyo: Ibhedi Yokumkanikazi
Xa ufika kwindlu yakho yamaplanga, uza kuba nendawo evulekileyo yokupaka iimoto nezithuthuthu eziliqela uze ube nezithuthi ezilula xa kukho imozulu. Jonga ukufumaneka kwezindlu zeholide ezikufutshane (Ukutshintsha izindlu # 407wagen & 407512) uze uye kule ndawo intle kunye nabahlobo bakho abayi-6 abasondeleyo.
Ngena ngaphakathi uze uphumle kwindawo yokuhlala etofotofo nezakutshanje, enabo bonke ubutofotofo bekhaya lokwenyani-ukusuka-ekhaya. Vula iinkqubo ozithandayo kwi-flat-screen TV okanye ufunde incwadi phambi kwendawo yokubasa umlilo xa udinga ixesha lokuphumla ngaphakathi.
Ikhitshi elincinci liza nesitovu esineepleyiti eziyi-4/ioveni, umatshini wokwenza ikofu, i-blender nazo zonke izinto zokupheka ukuze ulungiselele zonke iindlela zokupheka ozithandayo. Yiya phandle ngemini enelanga uze utshise igrili yamalahle ukuze ubone indawo yokoja.
Emva kokuzonwabisa kwakho kwemihla ngemihla entabeni, phola imisipha ebuhlungu uze uphole ibhafu yakho enamanzi ashushu ngaphambi kokuba uyibize ngobusuku. Le ndawo iquka ibhedi enkulu etofotofo negumbi lokuhlambela eliphucukileyo ukuze uphumle uze ulungiselele olunye usuku olumnandi.
Xa ungaphumli kwiindawo ezitofotofo ze 'Snuggle Inn,' yonwabela ukufikelela lula kwiindawo ezinomtsalane, ukuthenga nokutya kwidolophu yaseBryson City. Tyelela i-Great Smoky Mountain Railroad, thatha isidlo sasemini uze undwendwele imyuziyam yesitimela ukuze wonwabe.
Shayela nje imizuzu eyi- ukuya kwi-Deep Creek Campground kunye ne-Trailhead okanye ezinye iindawo kwi-Great Smoky Mountains National Park. Nyuka intaba uye kwi-Rom Branch Falls okanye kwi-Indian Creek Falls uze ubone amathuba okuloba, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukukhwela isikhephe nokunye. I-Nantahala Outdoor Centre ikumgama oziikhilomitha eziyi-16 ibe inezinto ezinokonwatyelwa ezinjengokukhwela isikhephe emanzini amhlophe, ukuhamba ngephenyane kunye ne-zip-lining!
Yiya kwiimayile eziyi-12 kwidolophu yaseCherokee ukuze udlale kwiikhasino zasekuhlaleni uze utyelele iivenkile ezinobugcisa nemizobo yaseMerika. Chitha ingokuhlwa yeholide yakho kwidolophu yaseBryson City apho uza kufumana izinto zokwenza ngaselunxwemeni kwiTuckasegee River, ukungcamla ibhiya e-Nantahala Brewery kunye neevenkile zokutyela ezifana ne-Everett Street Diner.
Izimvo eziyi-20 987